Uma baahnid in garanayso waxaasi in uu yahay danbi iyo in kale. Waad samayn kartaa in aad booliska wargaliso hadana.
Waxa fiican in loo soo sheego sida ugu dhakhsaha badan ee danbiga ka dib. Laakiin waxaad danbi soo sheegi kartaa, xataa haddii uu wakhti badan ka soo wareegay.
Halkan ayaad ka ogaanaysaa sidaad u sameynayso soo wargalinta booliiska
Markasta oo aad dacwad boolis gudbiso, waxaad sheegaysaa magacaaga, telefoonkaaga iyo meesha aad degan tahay. Sidoo kale waxaad ka waramaysaa wixii dhacay, inta ugu badan ee aad awoodo. Tusaale ahaan meesha ay ka dhacaday iyo xiliga ay dhacday.
Booliska ayaa ku waydiin doona waxyaabo badan, tasoo ku xidhan danbiga aad soo gudbinayso waxa uu khuseeyo. Booliska ayaa dooni kara in ay ogaadaan dhaawacyada kusoo gaadhay hadii waxyeelo laguu gaystay ama xadgudub kugu dhacay. Booliska ayaa ku waydin kara markada ama nooca moobilkaaga hadii lagaa xaday.
Wax waad ka beddeli kartaa dacwadaada hadii aad gadaal ka soo xasuusato wax kale.
Sidee ayaan u ilaalin karaa caddaynta dambiga?
Booliska ayaa laga yabaa in uu baadhitaan ku sameeyo kadib danbigu markuu dhacay. Sidaa darteed waxaa lagaa rabaa in aadan nadiifin ama waxba ka badalin meesha danbigu ka dhacay. Ma maydhaysid ama ma tuuraysid dharkaaga hadii lagu jirdilay ama xadgudub galmada laguu gaystay.
Way wanaagsan tahay in uu dhakhtar ku baadho haddii lagu jirdilay ama xadgudub danbiga galmada laguu gaystay. Tusaale ahaan waxa lagugu baadhi kara xarunta daawaynta degdega ah (akutmottagning), xarunta cafimaadka (vårdcentral) ama xarunta cafimaadka qaabilaada dhalinyarada (ungdomsmottagning).
Waxa jira cadayn aad adigu meel dhigan karto iyo kuwo kale oo aad booliska tusi karto. Tusaale ahaan waxaad ka qaadi kartaa sawir shaashada mobilkaaga ama kombuyuutarkaaga hadii cidi ku hanjabto ama ay fidinayaan sawiro aad adigu leedahay.
Yaa ogaan kara in aan sameeyay dacwad boolis?
Boolisku ciduu doono iskagama sheegi karo dacwada aad samaysay. Laakiin dacwad boolis ma ahaan karto mid gebi ahaanba ah sir. Waxa dhici karta in boolisku u sheego ilaaliye, hay’adda adeegga bulshada (socialtjänsten) ama waalidkaaga amaba cida kaa masuulka ah –laakin waa hadii ay adiga amnigaaga sugan yahay uun. Sidoo kale boolisku waxa uu u sheegi karaa cidii lasoo dawceeyay ama danbiga looga shakisanaa. Booliska u sheeg hadii aad ka cabsi qabto qofka aad dacwaysay. Boolisku wuxuu u baahan yahay in uu ogaado hadii aad u baahan tahay in lagu ilaaliyo.